Uyilo loMzobo -IiCrevivos ezikwi-Intanethi | I-Creativos ezikwi-Intanethi (Iphepha 2)
Kule posi sikuxelela ukuba yintoni ubungakanani obucetyiswayo bekhadi leshishini ukuze ukwazi ukukhetha ifomathi efanelekileyo.
Kule posi siza kuphelisa onke amathandabuzo kwaye siya kukufundisa nendlela yokubala ubungakanani bomfanekiso wedijithali.
Kule posi sikubonisa izixhobo ezi-3 zasimahla zokwenza iipowusta kwi-intanethi ngokukhawuleza nangokulula.
Kule posi senze ukhetho lwezifundo ze-Illustrator ezilungileyo ezikhoyo kumnatha.
Ukuba ujonga iikhosi zeFotohop ezihambelana neemfuno zakho, musa ukuchitha ixesha elininzi ngokuthelekisa, funda izindululo zethu.
Izifundo ze-10 zezi zinikezelwa yiDomestika Scholarship 2021 kwabo bayili abonisa ubuncinci iiprojekthi ze-3.
I-Adobe Photoshop sele ikhona kwiiMacs ngeApple Silicon
I-chip ye-M1 kwi-Mac ngoku inokubonelela ngesantya esipheleleyo sokuqhubekeka nokwenza i-Photoshop eboniswe yiAdobe.
Nantsi into entsha ngo-Matshi ukusuka kwi-Adobe yePremier Pro, Emva kweZiphumo, kunye neNkulumbuso Rush
I-Adobe ayimi ngxi kwaye izisa iindaba zokuphucula ukuhamba komsebenzi kunye neenkqubo ze-Adobe zevidiyo.
Namhlanje enkosi kumhlobo webhlog ndiyifumene inguqulelo ephathekayo yeCorel Zoba iX5 yokukhuphela simahla.
Kwakhiwa njani uphawu lwentengiso
Ubunikazi obubonakalayo bephawu buchaphazela umfanekiso wenkampani. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yakhiwe njani, ungaphoswa yile post!
Uhlaziyo lwe-Adobe lwePremier Pro kunye nasemva kweZiphumo, kubandakanya isigama sabo ukuyenza ibandakanye
Okubandakanyeka ngakumbi ngokuhlaziya isigama seeapps ezinje ngePremier Pro kunye neZiphumo zangemva kwaye nazo zizisa amanqaku amatsha.
Kwiintsuku ezingama-90 ungazama ifoto yoBumbano, uMyili, kunye noMshicileli obeka ityala kwakhona ngobhubhane.
I-Adobe Premiere Pro, iPremier Rush kunye noPhicotho-zincwadi ngoku ziyafumaneka kwiinkqubo ze-Apple M1 kwi-beta
Kwisiqingatha sokuqala sonyaka iAdobe iya kukhupha ingxelo yokugqibela yePremiere Pro, Rush kunye noPhicotho lweenkqubo zeApple M1.
Thatha inxaxheba kwimiceli mngeni yoyilo yeAdobe kunye nePstrong yoStudios kwifilimu elandelayo yoMphefumlo
Ifilimu entsha ka-Pstrong yoopopayi Umphefumlo ngumthombo wokhuthazo kulo mceli mngeni we-Adobe.
I-Adobe Lightroom iba yinkqubo yemveli yeApple M1 kunye Windows 10 kwi-ARM
I-ARM kunye neApple M1 sele inenguqulelo yendalo yeAdobe Lightroom ekhoyo namhlanje yokuphucula ukusebenza kwayo.
Uhlaziyo lweAdobe kwiFotohop ukuze lube yeyona nkqubo iphambili ye-AI yoyilo
Uhlaziyo lweAdobe iFotohop kwaye luyazisa ngeAdobe MAX ukwazisa ngenkqubo ye-AI ephambili yezinto eziyilayo.
I-Adobe ikhupha i-Illustrator ye-iPad kunye neFresco ye-iPhone
Iiapps ezimbini ezihlala kwi-iPad ene-Illustrator kunye neAdobe Fresco kwi-iPhone yokuxhasa ukhetho kwezi zixhobo.
Iimpawu ezimbini ezintsha eziza kungekudala kwiAdobe Illustrator kunye neAdobe Fresco
I-Adobe isinike izinto ezimbini ezintsha eziza kufika kwi-Illustrator naseFresco kungekudala. Ngoku sisele kancinci kwiAdobe MAX.
Ukujonga kwangaphambili kwe-Adobe indlela osemqoka omtsha wokulungiswa kombala osebenza ngayo kwi-Lightroom
Ayizukuphela kwento entsha yokulungiswa kombala eAdobe eya kufumaneka kwiLightroom, kodwa iya kuthi…
Ngoku unoku-odola kwangaphambili iAdobe Illustrator ye-iPad kwiVenkile yeApple yeApple
Isicelo esikhulu esithatha inxaxheba kumava e-Illustratror kwidesktop kwi-Apple iPad yethu.
Uhlaziyo lweAdobe kwiPremier Pro kunye nasemva kweziphumo ngezi ndaba
Inyanga egcwele iindaba kwiinkqubo zeAdobe yeNkulumbuso nasemva kweenkqubo zokuhlela ividiyo.
Yenza ipowusta enemibala yeLady Gaga ngomceli mngeni woYilo lweAdobe
Ukhuphiswano esikwanalo eSpain kwaye olukuvumela ukuba wenze ipowusta enemibala esekwe kwiChromatica kaLady Gaga.
Inkqubo ye-Adobe Fresco yokupeyinta kunye nepeyinti ngoku iyafumaneka kuzo zonke iiWindows PC
Khuphela iAdobe Fresco ukuze ube nesixhobo seAdobe esilingisa ukuzoba kunye nokupeyinta ngebrashi yakho Windows 10 PC.
Kulo nyaka ubhaliso lweAdobe MAX 2020 luvuleleke kuwo wonke umntu kwaye simahla
Inkomfa yonyaka ye-Adobe iya kuzisa umxholo ongaphazanyiswanga weeyure ezingama-55 phantse kulo nyaka.
Jikelezisa i-Canvas kunye ne-Edge egqibeleleyo yokuza kwi-Photoshop kwi-iPad
Iimpawu ezimbini ezinomdla kakhulu ukuphucula ukuhamba komsebenzi kwi-Photoshop kwi-iPad. Ngoku ungakhetha ezo nwele.
Yonke imisebenzi enokubakho unokuyifumana njengomyili wemizobo
Ngaba uyabuthanda ubugcisa bedijithali? Ngaba uyafuna ukuba ngumyili wemizobo? Lo msebenzi wobugcisa unamathuba amaninzi emisebenzi, masibazi!
Le iplagi isuswe.bg iyakwazi ukususa imvelaphi yefoto kwi-Photoshop
Ungayisusa imvelaphi kwifoto kunye nale plugin intsha iphehlelelwe ngokususa.bg kwaye yaziwa ngewebhusayithi yayo yasimahla.
Nyusa uyilo lwakho ngokulandela la manyathelo alula
Ngaba ungathanda ukwazi ezinye izixhobo ukunika ukubonakala ngakumbi kuyilo lwakho lweemveliso? Uzoqala ngaphi? Le yiposi yakho!
Isiphithiphithi esicocekileyo yile "metro" yesitayile semephu kaloliwe yomhlaba
Imephu eyenza ukuba icace gca ukuba zeziphi izixeko ze-nexus apho kudlula le mizila kaloliwe. Isitayile sikaloliwe ongaphantsi sisiphithiphithi.
Indlela entle yokwazisa abanye ukuba uzihlela njani ezo foto kwiLightroom yenye yezinto ezintsha kuHlaziyo lweNyanga.
Intsha ebalulekileyo ye-Adobe Illustrator kwaye ke ukuphucula ukuhamba komsebenzi ngokugcina umsebenzi esiwenzayo efini.
Ukusuka kwi-Adobe Premiere Pro ungakhangela kwaye ungeze iitayile zomsindo kwiAdobe Stock ngokulula konke kwihlabathi ukuphucula ukuhamba komsebenzi.
Ngaba ungathanda ukwazi indlela yokwenza iipateni okanye iiprinta zokuzisebenzisa kwiimveliso ezingenakubalwa? Kule posi siza kufunda indlela yokwenza ngokulula.
I-Adobe Photoshop ihlaziywa kwidesktop kunye nomsebenzi ophuculweyo wokukhetha izihloko kunye nenani lezinto ezintsha.
Uyenza njani iyunithi ephindayo ngeFotohop
Ngaba uya kuthanda ukwazi ukuba uyenza njani into eprintiweyo ye-textile kwimifanekiso yakho? Andiqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? ukwindawo elungileyo!
Ungayicoca njani imifanekiso epeyintwe ngesandla ngeFotohop
Ngaba uyakuthanda ukupeyinta ngesandla kwaye ufuna ukuba imizekeliso yakho ijongeka ilungile ngokwamanani? Le yindawo yakho! Ngena kwaye siza kukufundisa indlela yokwenza.
I-Adobe ikhupha i-Photoshop Camera kwi-Android nakwi-iOS
Uhlelo lokusebenza olukhulu lokuphinda ubambe umbulelo kuAdobe Sensei, itekhnoloji yeAdobe yeArtificial Intelligence yeKhamera yeAdobe Photoshop.
Ungawufaka njani umzekeliso kwikhompyutha ngaphandle kokuphulukana nomgangatho
Ngaba uyakuthanda ukudweba nokupeyinta kwaye awazi ukuba ungayifaka njani imifanekiso yakho? Ukuba udiniwe kukungafani nenye kwinyani, ngena!
I-Adobe ihlaziya ilogo yayo kunye nesazisi sayo
Ukwenziwa okupheleleyo kwesazisi se-Adobe brand kunye ne-logo entsha ye-Adobe enombala obomvu omtsha, "oshushu".
Ukuba unayo ithebhulethi ye-Android okanye i-Chromebook unethamsanqa: IKrita ngoku iyafumaneka
Ukufika okuhle kwe-beta evela eKrita, inkqubo yoyilo ye-Photoshop evulelekileyo kwaye osele unayo kwi-Android yeetafile kunye neeChannelbook.
Ivili elitsha lemibala elifikelelekayo kwi-Adobe Colour yoSuku lokuFumaneka kweLizwe
Ukuphawula uSuku lokuFikelela kwiHlabathi liphela, iAdobe ihlaziye umbala, iwebhusayithi yayo inikezelwe ekwenzeni imibala yemibala.
Nantsi into entsha kuhlaziyo lweeVidiyo zeLifu leVidiyo
Usuku oluhle lokuhlaziywa kweAdobe kwiVidiyo yeLifu yeVidiyo kunye neeaudiyo. Imveliso njengenjongo.
Izinto ezinqabileyo zeAdobe Fresco, usetyenziso lokuva ukubanjwa kwe «ibrashi»
Umbono weAdobe Fresco ibikukuxelisa ukubamba kunye noxinzelelo lwebrashi yokwenyani. Zikwezi ...
Iibrashi zebrashi kunye nemvakalelo zifika kwiAdobe Photoshop kwi-iPad
Amagophe afika kwiAdobe Photoshop ye-iPad kunye nenye into evumela ukuba sizobe ngendlela "elungileyo" nangendlela yokwenyani.
I-Adobe ihlaziya kakhulu eziapps zeLifu lokuDala: iNkulumbuso yePro, emva kweZiphumo, iFresco kunye nokunye
Uhlaziyo olubalulekileyo kuthotho lweeapps zeLifu lokuDala. I-Adobe iyibhengeze kwiiyure ezidlulileyo kwaye saxoxa ngeenkcukacha zayo.
Ungasebenza njani ngeebhodi ze-artboard kwi-Illustrator
Ungasebenza njani ngeebhodi ze-artboard kwi-Illustrator yoku-odola indawo yethu yokusebenza xa usenza uyilo.
Indlela yokuthumela ngaphandle iifayile kwiAdobe Illustrator
Fumana indlela yokuthumela ngaphandle iifayile kwiAdobe Illustrator ngendlela yobungcali, ukufezekisa ukuthunyelwa ngaxeshanye kweefayile zakho.
Zisebenza njani iiLayers kwiAdobe Photoshop
Kule tutorial siza kukuxelela indlela ezisebenza ngayo kunye namaqela kwiAdobe Photoshop, inyathelo ngenyathelo kwaye ngaphandle kwengxaki.
Uyilungisa njani ifayile ye-UVI varnish kwiFotohop
Ngena kwaye ufumane indlela yokulungiselela ifayile ye-UVI ye-varnish kwi-Photoshop ngokukhawuleza ukufumana uyilo olushicilelweyo kunye nokuchukumisa kokuqaqamba.
Sebenza nabalawuli kwi-Photoshop
Fumanisa ukuba usebenza njani nabalawuli kwiFotohop ngendlela eyiyo ukunqanda iimpazamo kwinkqubo yokuprinta okanye yokufunda uyilo lwakho.
Ukudibana kubeka isuti yayo yonke yesoftware yasimahla kangangeentsuku ezingama-90
Iindlela ezintathu zokuhlangana ezinokuvavanywa simahla zinokuvavanywa simahla kwiintsuku ezingama-90 zecoronavirus kunye nokuvalelwa yedwa.
Uhlaziyo lwe-Adobe Photoshop ye-iPad enezinto ezininzi ezintsha
Ukukhethwa kwento yenye yezona zinto zibalaseleyo zifakwe kuhlaziyo olutsha lweFotohop olwenziwe yiAdobe.
Imigaqo ye-10 yoyilo olulungileyo
Ukuthi uyilo lulungile okanye lubi kusekwe kwimithetho esekwe kumava nakwisifundo sabayili abaninzi.
Isitudiyo sokuyila i-Odosdesign siyila ngokutsha umfanekiso wobumbano kaFeria Hábitat Valencia. Fumanisa umfanekiso wakhe omtsha kule posi.
Ukukhetha umbala ayingomsebenzi ulula, ke sikuphathela isixhobo esinokukunceda ufumane indibaniselwano egqibeleleyo, iAdobe Colour CC.
I-2020 ingaphezulu komdla nge-Photoshop ye-iPad efumana iindaba ezingakumbi kwaye sikuxelela zona kwi-Creativos.
Iinkqubo zeReticule sisikhokelo esifanelekileyo kubayili kuba iyalela uyilo lwethu kwaye siyinika ukuhambelana kunye nobuhle. Funda ngakumbi ngaye.
Umxholo-Ukwazi ukugcwalisa kuya kufika kunye nophuculo kuhlaziyo olulandelayo lweAdobe Photoshop kwaye iAdobe ibonise ividiyo.
Ngoku unokugcina iapps entsha yeAdobe Fresco
I-Adobe Fresco iza kulinganisa imvakalelo yokuzoba okanye ipeyinti ngepensile yokwenyani okanye ngebrashi. Okwangoku kuphela kwi-iPad.
Iminyaka engama-20 yobomi beAdobe InDesign
Ingqokelela yemifanekiso ebonisa uhambo lweAdobe InDesign kwaye neAdobe uqobo yabelane ngayo nathi sonke.
Ungaphuthelwa naziphi iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwi-Adobe CC kunye nale template
I-Shutterstock ikhuphe le template imiselweyo yekhibhodi kwi-Adobe CC. Kwitemplate unokufumana ukuba ...
Amagqabantshintshi iya kuba ligama elitsha le-GIMP ukulungisa ingxaki ngegama lakho
Amagqabantshintshi kukuzivelela kwe-GIMP enegama elithintela ukungaqondani okunikezwe ngenye yeenkqubo zokuhlela ezaziwayo.
Yenza imibala ehambelana nekhamera yakho ephathekayo ngohlaziyo olutsha lweAdobe Capture
I-Adobe Capture ifumana uhlaziyo olutsha olukuvumela ukuba usebenzise ikhamera ukukhupha imibala ekujikelezayo.
Umxholo ovela kwi-logo yezihlangu zeCrocs uyinika "ukubukeka" okuhlaziyayo
Uphawu lwezihlangu zeCrocs lubonakala ngathi aluzange lubekho ngaphambili ngombono womyili oyiphucule kakhulu ukuba yothuse uninzi.
Ukuba ulungiselela uyilo lwe-triptych, le template ngokuqinisekileyo iya kuza iluncedo ukukukhokela. Kuyo uyakufumana yonke into oyifunayo ukuze uphephe iimpazamo
Amanyathelo okuqala amathathu okuqala ukuyila
Ukujongana noyilo kwasekuqaleni akukho lula. Ndikuxelela amanyathelo am amathathu angaphambili okuyila uphawu olunokukunceda uqale umsebenzi wakho.
Iifries zikaMcDonald zisebenza njengesikhokelo sendlela ngenxa yombono omkhulu owenziwa yiarhente yentengiso.
Imyuziyam ekwi-Intanethi ikubonisa imbali yesiqalo kunye nokuvela kweFotohop
Ndwendwela iMyuziyam yenguqulo ukuze ufunde ngembali yeapps, isoftware, iwebhusayithi kunye neendlela zokusebenza okoko zaqala ukubonakala
Ukuphucula izikrini kunye nomhleli wasimahla okwi-Intanethi obizwa ngokuba yiScreenzy
IScreenzy yinkqubo yewebhu ekuvumela ukuba uphucule zonke ezo zinto uzithathileyo kunye nePC yakho kwaye ufuna ukuyivelisa ngendlela entle ngakumbi.
Ikhamera eluhlaza kwabaqalayo
Sikuxelela malunga nokusebenza kweKhamera eluhlaza ngendlela elula nesebenzayo yokuhlela iifoto njengengcali ngokukhawuleza nangokulula.
IArtRage 6 ifika neenjongo ezicacileyo zokuba sisixhobo esilinganisa ngokwenyani loo mava ...
Funda ngendlela ekhawulezayo nelula yokucima umntu okanye into kwiifoto zakho kunye neFotohop ngaphandle kolwazi lwangaphambili njengengcali
Ukwenziwa kwedijithali nge Photoshop yabaqalayo
Funda ngendlela yokwenza i-Photoshop ngokwamanani kunye neziphumo zobungcali ngaphandle kolwazi lwangaphambili lwe-Photoshop. Ilungele abaqulunqi bokuqala!
Ubuhlobo Umshicileli ngamagama angama-300: inayo yonke into oyifunayo kulungelelwaniso lomhleli
Ummemezeli woBumbano uba yinto ebaluleke ngakumbi kunaleyo isuka kwiAdobe kwaye iza nento ekhethekileyo.
Umdibanisi Umshicileli unokumakisha ngaphambi nasemva kwabaqulunqi
USerif ubhengeze ngokusungulwa koPapasho loManyano into enkulu neyohlukileyo: tshintsha phakathi kweFoto, uMshicileli kunye noYilo ngonqakrazo olunye.
Sifunda ezinye zeenkosi ekudalweni kwamaphepha okufika kunye nentengiso ephendulayo ye-imeyile kwaye ke siziqhelanise naso nasiphi na isixhobo.
I-Adobe ifuna abavavanyi ukuvavanya i-Photoshop CC kwi-iPad
I-Adobe ikhangela abavavanyi ukuvavanya amava e-Photoshop CC kwi-iPad kwaye ngubani oza kuzisa inkqubo yedesktop kwithebhulethi.
Le infographic ikubonisa zonke ezinye iindlela kwinkqubo nganye ye-Adobe Creative Cloud
Le infographic ngumfanekiso wedijithali ibonisa zonke ezinye iindlela kuzo zonke iinkqubo ze-Adobe Creative Cloud
I-Adobe ihlaziya isixhobo sayo sewebhu sombala wombala obizwa ngokuba yiAdobe Umbala
Ukuba ujonga isikhethi sombala esizenzekelayo, sele unombala weAdobe ukhetho lokusebenzisa iPantone ukuzichaza.
Ukwenza i-ebook inokuba sisicwangciso esiliqili sokuthengisa kubathengi bakho ukuze bazi iimveliso kunye neenkonzo zakho ngcono.
Ukuvula kuya kulahleka ngokufika kweMojave, inguqulelo entsha ye-macOS eya kwenza indlela yokuba sibe neefoto zeApple.
Kwi-Illustrator kungekudala uza kukwazi ukusebenzisa unqakrazo olunye imibala kuyo yonke imimandla yemifanekiso eneepateni ezintsonkothileyo. Yonga ixesha.
Ukubalisa amabali eBrand sisicwangciso sokuthengisa esisetyenziswe ziimpawu ukuvelisa unxibelelwano olukhulu kunye novelwano kunye nomthengi.
Sichaza indlela yokukhetha kunye nokudibanisa iifonti yesazisi somzobo wegama lakho ngamanyathelo nje ambalwa alula.
"Okuncinci kuninzi" Njengokuba eli binzana livakala kuthi, yeyona nkcazo ilungileyo sinokuthi siyinike iScandinavia-yoyilo.
Uyikhetha njani iphalethi yombala efanelekileyo yohlobo lwakho
Iphalethi yombala yesazisi segama kufuneka ibe nemibala emi-4 ukuya kwemi-5. Kuya kufuneka babambe amehlo kwaye babambe ubuntu bohlobo.
Yenza imizobo yePinterest yeBrand yakho ema ngaphandle
Ukuba uza kukhuthaza ibhlog yakho okanye uphawu lwakho ngePinterest, kuya kufuneka wenze imizobo ebonakalayo. Funda ukuba ungalandela njani le migaqo isisiseko.
Okokugqibela kuza isixhobo sokubhaliweyo sokuSebenzisa i-iPad yakho
Ukuba unePrereate, ngoku unokufaka ingxelo entsha ekuvumela ukuba ufikelele kwisixhobo esitsha sokubhaliweyo kwaye ke ulibale ngabantu besithathu.
Amaxesha amaninzi kwenzeka kuthi ukuba sibone iifonti esizithandayo kodwa asizazi ukuba zintoni. Apha sibonisa izixhobo ezi-5 zokuchonga ngokulula.
Yongeza oopopayi kwiifoto ozifakayo kwi-Instagram kunye ne-Scribbl
Enkosi kuSribbl ungongeza oopopayi kwiifoto ozifaka ku-Instagram. Inazo zombini iitemplate ezimiselweyo kunye nokukwazi ukuzenza.
Yenza ibhodi yeMood ukuyila umzobo wophawu lwentengiso
Ukuba siza kuyila isazisi somzobo, singasebenzisa ibhodi yeeMood esivumela ukuba sidlulisele izimvo esinazo engqondweni, Kulula kakhulu ukukwenza!
Imibala kwaye ingenantlonelo: Uyilo lweMemphis luyabuya njengesiqhelo
Imibala eyomeleleyo, iipateni zamanani aphindaphindiweyo kunye nezinto ezikwisitayile sePop Art, zezinye zezinto ezibonisa uyilo lweMemphis.
I-Slack iyitshintshile i-logo yayo kwakhona, nangona ngeli xesha yeyiphi i-icon esinokuyibona kwizixhobo zethu eziphathwayo.
Ngoku ungabutshintsha ubungakanani bew watermark kwiAdobe Photoshop Express
Enye yazo lithuba lokutshintsha ubungakanani bewermark kwiAdobe Photoshop Express ye-Android.
I-logo entsha yeZara
Ixesha likaZara lasehlotyeni-ehlotyeni le-2019 alisiziseli ingqokelela entsha kuphela, kodwa notshintsho lwe ...
I-Adobe ifumana i-Allegorithmic, inkampani ehamba phambili ekuhleleni i-3D kwimidlalo, kwi-cinema nokunye okuninzi
I-Allegorithmic luphawu lomdlalo kwihlabathi lokudlala kunye nokuzonwabisa. I-Adobe ifuna ukuyizisa kuwo onke amabakala oyilo.
I-Slack ivula ilogo entsha egcwele umbala ngaphandle kokulibala ubuncwane bayo
I-Slack sisixhobo esibalulekileyo sonxibelelwano sanamhlanje kolo tshintsho lwedijithali oluninzi olufunwa ziinkampani ezininzi kunye neenkampani.
I-Wacom isungula i-Cintiq entsha ilungele abafundi abancinci bezobugcisa kunye noyilo
Ukuba ubungcali kuhlahlo-lwabiwo mali okanye umfundi uthatha amanyathelo akho okuqala kuyilo lwedijithali, iCintiq 16 yeyakho.
Ulawulo lwemibala yokuprinta
Phambi kokuba sithathe iprojekthi yokugqibela siyiyise koonondaba, kufuneka silawule kakuhle umbala. Sincoma izixhobo ezikwi-Intanethi ukuguqula imibala yakho.
Yenza oopopayi abahle kakhulu bejiyometri ngokuhamba kunye nomfanekiso omnye
Ishukumiso yinkqubo entsha yewebhu ekuvumela ukuba wenze oopopayi okanye imifanekiso yejiyometri emileyo kwifoto enye. Isisombululo esikhulu.
I-Canvas yinkqubo entsha kaGoogle yokuzoba ngokukhawuleza kunye nokubhala
Yonke imizobo eyenziwe ngeChannel yeGoogle Chrome iya kudityaniswa neakhawunti ehambelana nayo, ukuze uzobe naphi na.
Ngobukrelekrele bokufakelwa le webhusayithi iyakwazi ukuphelisa imvelaphi yomfanekiso kwimizuzwana nje. Yonke impumelelo.
Fumana ii icon zeKrisimesi zoopopayi simahla kwi-SVG nakwi-PNG
Ngomxholo weKrisimesi, iAdobe iguqula ibe yiSanta Claus yokubonelela ngekhulu leempawu zoopopayi kuzo zombini i-SVG kunye nePNG.
I-Coral ephilayo ngumbala wePantone wango-2019
Sele sinombala omtsha wePantone we-2019 kwaye le yiCoral Living. Njengonyaka wonke kwaye ...
Yenza eyakho imizobo yevector kunye neeHumaaans ngaphandle kokuba ube unombono wokuzoba
I-Humaaans yinkqubo yewebhu onokuthi uyenze imifanekiso yevektri yabantu kuzo zonke iintlobo zobume kunye noopopayi. Isondo.
Iimpawu zeMicrosoft ezintsha nezenziwe ngokutsha zeOfisi
Ewe, sinokuthi ekugqibeleni kwiinyanga ezimbalwa siza kubona ii-icon ezintsha zeMicrosoft Office. Zonke iindaba.
Injini yokukhangela yePantone ehlaziyiweyo yokufumana amaxabiso ombala alinganayo
Ukuba ufuna ukufumana umbala othile, ungaphoswa luhlaziyo olwenziwe yiPantone ngesona sixhobo saso silungileyo.
Ngenxa yegciwane, iAdobe isusa iifayile ezili-100.000 zomyili
Uye wamangalela i-Adobe ngokusilela okukhulu okwazileyo ukucima i-100.000 yevidiyo kunye neefayile zemifanekiso kwikhompyuter yakhe.
Umbala we-Leap, okanye uhambe ngembali kunye nemibala eyahlukeneyo yeephalethi
Umbala weLeap uyakwazi ukukuthatha ngamaxesha ahlukeneyo embali ukuze ufumanise ukuba yeyiphi eyona mibala isetyenziswayo.
IPad entsha Pro 2018 njengethebhulethi entsha yabayili
Amaxabiso aphakathi kwe-878 kunye ne-2099 euros ye-iPad Pro entsha ye-2018 yethebhulethi efanelekileyo yoyilo engajonganga kwixabiso.
Iingcebiso malunga nokuthengisa ilogo
Iingcebiso zokufaka ilogo okanye umfanekiso kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle koyilo kunye nenkqubo yedijithali, ukuze nabanye baxhamle kuyo.
Khuphela uze uprinte i-Affinity Photo kunye noMshicileli iindlela ezimfutshane
Ifoto yoBumbano kunye noMyili ziinkqubo ezimbini zoyilo ezizezona zilungileyo kwiFotohop kunye ne-Illustrator. Khuphela i-infographic ngeendlela ezimfutshane.
Ezona pilisi zemizobo zibalaseleyo
Uluhlu lweepilisi zemizobo ezigqwesileyo ukuze ufumane umbono ongcono wento oza kuyithenga ngokulandelayo ngoLwesihlanu oMnyama okanye omnye umsitho wentengiso.
Iwebhusayithi entsha yeAdidas yothotho lweYung ibuyela ngexesha kwi-intanethi yee-90s
Ukunyusa uthotho lwayo olutsha lwe-Yung, i-Adidas isibuyisela kwi-90s uyilo oluchanekileyo noluyinyani namhlanje.
I-Adobe ikhupha iNkulumbuso yeRush CC yeVidiyo yeApp
Ukuba ufuna ukupapasha umxholo wevidiyo esemgangathweni ngaphandle kokwazi okuninzi, iNkulumbuso yeRush CC ikhutshiwe namhlanje kuyo.
Olunye ukhetho oluzenzekelayo oluzayo kwiFotohop Elements 2019
Inkqubo ebizwa ngokuba yiAdobe Photoshop Elements 2019 enezinto ezintsha ezinje ngobukrelekrele bokuzenzela kunye nokusebenza ngokuzenzekelayo.
Yenza ubungakanani kwakhona bemifanekiso ngobukrelekrele bokwenzela kwiThumbor
I-Thumbor ixhomekeke kwi-AI ngokusingathwa kwemifanekiso okrelekrele, nokuba kukwandisa ubungakanani bayo ngaphandle kokulahleka komgangatho okanye ukufaka iifilitha.
I-Adobe Photoshop Express yongeza izitikha, iziphumo zeblur kunye nokunye okuninzi kuhlobo olutsha
I-Adobe Photoshop Express yenye yezona ndawo zifakelweyo zokuhlela iifoto kunye noyilo kwiivenkile ze-iOS kunye ne-Android. Ngoku ihlaziywa.
Uvavanyo lwePantone Umbala we-IQ luvavanyo lwabaqulunqi kunye nokukhawulezisa isakhono ngemibala
Uvavanyo lweMibala ye-IQ luvavanyo lwePantone oluvavanya ulwazi lwakho ngombala ukwenza iigradients kwimigca enemibala.
I-Adobe ibhengeza i-Acrobat DC entsha ukuphinda ichaze ukuba zeziphi na iiPDF
Kubo bonke abo banobhaliso kwiAdobe Acrobat, DC ifika neendaba ezininzi esiza kuzichaza.
U-Wacom ubhiyozela iminyaka engama-35 ekhupha izaphulelo
Ukuba ufuna ukuthenga naziphi na iipilisi zegraphic, ungasazi isibonelelo seCintiq Pro 13 kunye nezinye ezininzi eziza kuza kungekudala.
Incwadana yemigaqo, masifumanise ukuba yintoni
Kule nqaku siza kuthetha ngencwadi yemveliso kunye namacandelo ahlukeneyo ekufuneka siwabandakanyile kuyo. Uya kuba nakho ukwenza incwadi yakho yesikhokelo.
Sele sizazi iindaba ezilandelayo zevidiyo yeAdobe Creative Cloud
Ilifu lokudala liza kubandakanya inani lezinto ezintsha zevidiyo yeAdobe yeenkqubo ezinje ngePremier Pro kunye neZiphumo zangemva kunye nokunye.
I-Adobe Photoshop iqala phezulu: Iphucula umxholo-Ukwazi ukugcwalisa ukugcwaliswa kwemifanekiso
Ngale ndlela sinokukhetha okungakumbi eminweni yethu, njengokujonga kuqala umsebenzi wokugcwalisa weFotohop ngoQinisekiso-lokuQaphela.
Isikali yinkqubo yewebhu yokuvelisa isikali sombala ngendlela yobungcali
Isikali sibanjelwe kwi-github yokwenza isixhobo esikhulu sewebhu kuzo zonke iintlobo zabaqulunqi abaneliso kwimbala.
Kuya kufuneka ube Windows 10 ihlaziyiwe ukuze ube nakho ukonwabela uhlaziyo olutsha lwe-Photoshop kunye ne-Lightroom
Kulungile, iAdobe ibhengeze ukuba kuyakufuneka sibe nezinto zokugqibela Windows 10 kunye nohlaziyo lweMacOS olufakelweyo ukonwabela iPhotohop kunye ne-Illustrator.
Yenza isicatshulwa njengesigqumathelo sokucofa kunye noMzekeliso
Funda ukuba ungazenza njani iimaski ezisekwe kwisicatshulwa kwiAdobe Illustrator. Ngala manyathelo alula, sikufundisa ukuba usazi esi sixhobo.
UMuse udityaniswa nee-80s kunye 'nekhava' entsha yealbham yakhe entsha
Njengomdyarho weTV owaziwayo Izinto ezingaziwayo, uMuse ubuyela umva ngeminyaka ngesiciko sealbhamu yakhe entsha yomculo.
Ubuhlobo boMpapashi weBeta yasimahla iyafumaneka ngoku: Enye indlela yokwenyani ye-InDesign
Ngoku unokukhuphela i-beta yoluntu ye-Affinity Publisher ukuzama enye indlela eyiyo kwi-InDesign kwi-Adobe. Isithembiso.
Ukuchukumisa i-retro kweelogos ezaziwayo kwi-intanethi
IFuturePunk ngumyili onike iinkampani ezinje ngeGoogle, Instagram kunye neYouTube ubuhle bangaphambili. Isiphakamiso esinomdla esifanelekileyo.
Izixhobo eziluncedo zomyili wegraphic
Ngaba uyazazi izixhobo ezikhululekileyo ezinokufuna umyili wegraphic? Sikubonisa ezinye zezona zixhobo ziluncedo simahla.
Ukupakisha. Uyilo loqobo oluya kukumangalisa
Ufuna impembelelo? Sikubonisa uyilo olu-5 lokupakisha olwenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zesicelo ezingayi kukushiya ungakhathali.
I-Picular yi «Google» yemibala
Ukuba ujonge inkuthazo okanye ukwazi ikhowudi yemibala yohlobo olaziwayo, iPicular ilungile kuyo. Indlela entsha yokuya kuyilo.
Xa amaxabiso atshintsha uyilo
Ukuphumelela okukhulu kunokuza kwiiphakheji ezincinci. Emva kweminyaka eli-116 yokuthinjwa, iBarnum Animal Biscuits ineepakethe ezintsha.
I-Wabi-Sabi kunye noyilo lwegraphic
Ngaba uyazi ukuba yintoni iWabi-Sabi? Sichaza ngokufutshane intsingiselo yayo kunye nendlela yokuyisebenzisa kuyilo lwakho.
Ukongeza ekubeni sisixhobo esisetyenziswa emculweni, i-mashups kwimizobo ifezekiswa phantsi komgaqo ofanayo: ukudibanisa izinto ezimbini nangaphezulu.
Ukusetyenziswa kwesithuba esingathandekiyo kwintengiso yePepsi
U-Pepsi usibonisa ukuba unonxibelelwano olugqibeleleyo kuyilo kunye nokusetyenziswa okugqwesileyo kwesithuba esibi kwisibhengezo.
Ulawulo oluphezulu kwitypography
Luthini uhlobo lolawulo oluphezulu? Funda ngezixhobo ezibalulekileyo zokwenza umyalezo wakho ube nefuthe olifunayo.
UCiudad Persona: Umnxeba ovulekileyo weeposta zaseMadrid Gráfica
UCiudad Persona: Umsitho wonyaka weepowusta ezona zoyilo zibalaseleyo zamazwe aphesheya eMadrid.
Ungaphumelela njani kumthengi onzima?
Uyilo olwenziwe lunokusishiya sanelisekile ngokugqibeleleyo. Nazi ezinye iingcebiso zaloo mthengi ongathandabuzekiyo.
Iphalethi yombala egqibeleleyo kuwo wonke umsebenzi
Yonke into ekuyilo kunye nokwazi imibala yemibala kunye neetoni kubalulekile kwiprojekthi yenkampani ebalulekileyo. La ngamaqela aphambili ama-4.
Sikubonisa amanqaku aphambili ukuba ukhethe ithebhulethi yemizobo ehambelana neemfuno zakho ngokuxhomekeke kubushushu bayo, ubungakanani okanye inqanaba loxinzelelo
Iprojekthi ka-Adobe Rush yokuDibanisa ukuHanjiswa kweVidiyo yeQonga
Iprojekthi Rush imalunga nokuziswa kwimboniso ukubonisa isoftware efuna ukudibanisa zonke izixhobo zokuhlelwa kwevidiyo.
UWacom uthathe iiyure ezimbalwa ngale ntsasa ukubonisa uluhlu lweemveliso ezintsha ezivela kwikhathalogu yezixhobo zazo zonke iintlobo zeengcali.
Le pakethi yeziphumo zokubhaliweyo zeAdobe Photoshop ngama-90% isaphulelo sokuhlala kwi- $ 19. Ineentlobo ngeentlobo zeziphumo zesicatshulwa ezifana negolide, isinyithi, ukhuni, iidiliya nezinye ezininzi.
Yila ileyibhile yewayini esebenza kakuhle
Ukuyila iilebheli zewayini ezisebenza kakuhle kunzima njengayo nayiphi na iprojekthi ebonakalayo. Funda okungakumbi malunga noyilo lweprojekthi kunye neemeko ezifanelekileyo njengomzekelo.
I-Adobe isungula isicwangciso sasimahla seAdobe XD ukuze ube nezona zixhobo zibalaseleyo zoyilo
Ukuba ujonge ukuyila ujongano lweapp yakho elandelayo, isicwangciso sasimahla seAdobe XD silungele yona njengoko injalo ukusukela namhlanje.
Uluhlu lweekhonsepthi xa uyila ilogo
Uluhlu lweekhonsepthi xa kuyilwa ilogo yokuqinisekisa ukuba umfanekiso wethu wequmrhu unxibelelana ngokuchanekileyo ngendlela efanelekileyo nesebenzayo. Yiba nomfanekiso ngqondweni womzekelo omncinci osebenzayo.
Ukukhethwa kwemixholo eyi-10 yasimahla yeWordPress
Imfuno ekhulayo yamasayithi ayilelwe kwiWordPress yenza ukuba kufuneka ukuba abayili bakwazi ukuzikhulula kwimisebenzi ephindaphindayo enokuthi yenziwe lula. Ngale nto unokufumana imixholo yeWordPress eyenza lula lo msebenzi. Apha siqokelele iitemplate ezili-10 zasimahla ezisabelayo.
Isifundo se-10 sasimahla seWordPress esifanelekileyo kubaqalayo
Iqonga lokudala umxholo weWordPress liyaqhubeka nokukhula kwaye abathengi abaninzi nangakumbi banomdla wokusebenzisa le ndlela yokwenza indawo yabo. Lo ibe ngumsebenzi onenzuzo kakhulu kubaqulunqi kwaye yiyo loo nto sikufundisa okona kufundiswa kuko okungcono.
Imisebenzi yokuyila ngosuku lomsebenzi welinye ilizwe
NgoSuku lwaBasebenzi lwaMazwe ngaMazwe siza kubhiyozela imisebenzi yoyilo eya kuthi ibangwe kakhulu kwixesha elizayo. Ngaba yiYoutubers okanye iCoolHunter? UMyili weFashoni okanye iBlogger?
I-Pigzbe usetyenziso olufundisa abantwana malunga ne-imali yedatha
I-Pigzbe sisicelo esitsha esilungiselelwe abantwana esivumela ukuba bonge kwi-cryptocurrency. Iphuhliswe ngenkonzo yeBlockchain ebizwa ngokuba yiWollo, ikhuthaza abantwana ukuba bafunde ngezemali ngokudlala.
Uyilo lwamafranchise ukwenza i-inshurensi
Khetha phakathi kwezi franchise malunga noyilo kunye nehlabathi loyilo ukuqala ngokukhuselekileyo kwaye ufumane amava omsebenzi kwivenkile yekopi okanye kwinkampani yoyilo lwewebhu.
Izibane ezili-10 ezinomdla kwiveki yoyilo yaseMilan
IMilan Design Fair 2018 yangqina ngokukodwa uyilo. Apha sikubonisa ezona zoyilo zibalaseleyo zabayili abayintloko behlabathi.
Inyani emva kweprojekthi yoyilo
Ukunyaniseka kweprojekthi yoyilo ayisiyiyo into oyicingileyo kwezinye iimeko, ukusikelwa umda kwezoqoqosho, ukunqongophala kokuqonda kunye nomthengi okanye 'amava' abo kuyilo, zinokwahluka kumsebenzi owenzayo.
Ukuba ufuna ukubonisa uyilo lwekhadi lakho leshishini ngeyona ndlela ifanelekileyo, apha uya kufumana i-15 yasimahla yokukhetha izinto ezigqibeleleyo.
Ukuba ujonge ukwandisa ixesha lakho lomsebenzi, sukuchitha ixesha uphinda amanyathelo afanayo ukufikelela kwisiphumo sokugqibela esilindelweyo. Sebenzisa ngcono iintshukumo ezithile zeefotoshop eziza kunceda ukunika iifoto zakho isitayile osifunayo. Apha siqulunqe ezona zilungileyo.
I-typography, umxholo wolawulo, kunye nolwahluko wokuchwetheza
Ubuchwephesha, umxholo wolawulo kunye nochwethezo ngokuchaseneyo ukuze bakwazi ukunxibelelana ngokuchanekileyo kuyilo lwethu, lubenze basebenze ngakumbi kwaye bafikelele kubaphulaphuli abaninzi.
Uyilo lwekhulu leminyaka yeMetro yaseMadrid ngoku lusemthethweni
IMetro Madrid iphehlelele uyilo lokuphumelela phakathi kwabathathi-nxaxheba abali-1500 abangenise ukonyulwa kwabo, lowo unyuliweyo ngoka-Azucena Herránz
Umahluko wohlobo lweTypographic phakathi kokuKhangela kunye neKerning kunye nokusebenza kwayo ukuze uqonde ngcono ukuba ichwetheza isebenza njani kwindawo yokujonga kwaye uyisebenzise ngendlela efanelekileyo kwiinkqubo ezahlukeneyo.
Ulenza njani iphepha elimakishayo kwi-Indesign kulwakhiwo lobungcali lweeprojekthi zethu zokuhlela. Ukongeza iphepha elinamanani yinto esisiseko kunye nesisiseko, kodwa ngaba ungayenza ngokuzenzekelayo? Funda ngale post.
ICorelDRAW Graphics Suite 2018 ngoku iyafumaneka ngoyilo olutsha kunye neempawu zokuhlela ifoto
Ukuba uyilo unethamsanqa, iCorelDRAW Graphics Suite 2018 ifika njengenye yohlaziyo olukhulu olufunyenweyo.
Izixhobo eziyimfuneko ezingama-20 wonke umyili kufuneka azi
Ngaba wakha wazibuza ukuba ungawonyusa njani ukuhamba kwakho kunye nokuphucula ukusebenza kwakho njengomyili? Kweli nqaku sityhila i-20 yezixhobo ezisetyenziswa ngabona baqulunqi babalaseleyo.
IX-reyi yekholaji ukubona icala layo elifihliweyo
IX-reyi yekholaji ukuze ibone elona cala layo lifihlakeleyo kwaye ikwazi ukuqonda icandelo elingemva kweprojekthi nganye yemizobo. Iprojekthi nganye inolwimi, injongo yolo lwimi kukuthetha.
Ukufotwa kweefoto kunye nabaculi bayo abalishumi abakhuthazayo
Ukungenelela ngokufota kuye kwaba yenye yeendlela ezithandwayo kuyilo lwegraphic. Ngeemveliso ezinkulu ezithatha njengokhetho olukhethiweyo lwephulo labo, lixesha lokuba ufumanise ukuba imalunga nantoni.
Imikhwa engama-20 eya kukwenza ube ngumyili ophumeleleyo
Ngaba ukhe uzibuze ukuba yintoni abayili abaphumeleleyo abayenzayo ukufikelela apho bakhoyo? Kule nqaku sichaza imikhwa engama-20 eya kukunceda ube yenye yazo.
Iifonti zasimahla zoqobo ezigqibeleleyo kwiiprojekthi zoyilo
Apha siqokelela iifonti ezili-15 ezingaziwayo kunye nezasimahla ezifanelekileyo kwiiprojekthi zakho zobugcisa. Khuphela kwi-Sans serif, iifonti zovavanyo.
Iimpawu ezi-5 oya kuziqonda ukuba ziyintoni na le app ngaphambi kokuyivula
Iimpawu ze-5 ezikuvumela ukuba uqonde ukuba loluphi uhlobo lwesicelo oza kulisebenzisa ngaphambi kokuba ulivule kwaye kulula ukulichonga ngokukhawuleza kwi-launchpad yakho.
Iimpawu ezintlanu ezaziwayo zamanye amazwe zijoyina utshintsho, ubuncinci okomzuzwana, lwe logo yabo yokwazisa malunga neentshukumo ezahlukeneyo kuluntu lwanamhlanje.
Imiyalezo efihliweyo kwiimpawu zenkampani
Imiyalezo efihliweyo kwiimpawu ziyakwenza ukuba uphawu lwethu okanye imveliso isebenze kwaye ifikelele kubaphulaphuli abaninzi. Ezinye iilogo zinemiyalezo efihliweyo ngasemva kwazo, ubusazi?
Ukukhethwa kwamakhadi eshishini afanelekileyo kwiiprojekthi zakho
Kule nqaku sikulethela ezona khadi zamashishini zangaphambili eziza kwenza zonke iiprojekthi zakho zemizobo zikhanye.
Iimpawu zolu hlobo zitshintshiwe yi-8M
Kukho iilogo ezitshintshe uyilo lwazo ukuze zijolise kumzabalazo wabasetyhini kwi-8M (nge-8 kaMatshi yoSuku lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe) ukuxhasa ukulingana ngokwesini kuyo yonke imiba yayo, ngaloo ndlela kuxhaswe intshukumo emfusa.
Yila umzobo wentengiso kwiFotohop inyathelo ngenyathelo
Yila umzobo wentengiso kwiFotohop ngendlela yobungcali usebenzisa ezinye zezixhobo eziyimfuneko zale nkqubo yokuphinda ubambe kwidijithali ngokugqwesa. Funda ukusebenzisa i-Photoshop kwinqanaba elisebenzayo ngenyathelo.
Imidlalo emihlanu yokufunda ukusebenzisa izixhobo zoyilo
Le midlalo mihlanu iya kukunceda uziqhelanise nezakhono zakho njengomyili wemizobo. Ukuba ezinye zezixhobo azilunganga kuwe, unokuzilola apha. Yizame kwaye wabelane ngeziphumo zakho kwi-Intanethi kwi-Intanethi.
Umbono omtsha weenkampani kuyilo oluzinzileyo lokupakisha
Ukubaluleka kokusebenzisa imigaqo-nkqubo yokupakisha ezinzileyo kwiinkampani kwaye kutheni oosomashishini kufuneka bayamkele
Funda ukuba uyenza njani intengiso esebenzayo esebenzayo
Funda ukuba uyenza njani intengiso esebenzayo esebenzayo kunye nefanelekileyo ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi. Funda indlela esisiseko yokwenza naluphi na uhlobo lwegraphic yentengiso.
Uyilo lwebar yetshokholethi alubafanelanga abantu abaneswekile
Uyilo lwemivalo yetshokholethi engafanelekanga kubantu abaneswekile abanomdla kubuchule obuphezulu kunye netshokholethi. Uyilo lolu hlobo lwenkxaso belusoloko lukuhenda kubo bonke abayili.
UGoogle ususile iqhosha "Jonga umfanekiso" kwiziphumo zophando
UGoogle ususile iqhosha elasivumela ukuba sibone imifanekiso kwisisombululo sayo sangaphambili kwaye sizikope kwikhompyuter yethu
I-Adobe ikhupha ezi khithi ze-icon simahla kubaqambi abadumileyo ukuze uzisebenzise kwi-Adobe XD okanye nakweyiphi na inkqubo ye-Cloud Cloud.
Zekelisa i sweatshi kunye noyilo lwakho oluhle kwaye ukhuthaze wonke umsebenzi wakho ngendlela yobuqu nenomtsalane. Ukuba uyalithanda ilizwe lempahla eyolukiweyo, ungaqala ukubona ukuba umsebenzi wakho wegraphic usetyenziswa njani kweminye imithombo yeendaba.
Ndiyayithanda i-hue: umdlalo wevidiyo obonakalayo we-spectrum wabayili bewebhu
Umdlalo we-Android kunye ne-iOS ekhuthaza ukuba usombulule iiphazili zemibala ebonakalayo ukuze ukhulule ingqondo yoyilo kwaye uqhubeke nokufunda umbala.
ILufthansa iyila kwakhona uphawu lwayo kunye nomfanekiso wobumbano
ILufthansa ihlaziya ilogo endala yenqwelomoya emva kwesiqingatha senkulungwane yokuthatha umbala wayo omthubi oqaqambileyo esibhakabhakeni.
Iifonti eziSimahla zaNgoku ezingama-31 zaBayili
Iifonti zasimahla ezikhoyo ngoku ezibalaseleyo ukuba zintle kwaye ezineenjongo ezahlukeneyo kuzo zonke iintlobo zemisebenzi anokuyidinga umyili.
Iposti yabathandi boshicilelo lweeleta
Iposti yabathandi be-letterpress ye-nostalgic abafuna iindlela ezintsha zokwenza iiprojekthi zabo zemizobo. Kukho imisitho apho uchwetheza ngoyena mntu uphambili, yenye yazo iphuhlisiwe kwisiqithi saseTenerife (Canary Islands).
Adele, okanye indlela yokujonga iinkqubo zoyilo lweenkampani eziphezulu
U-Adele ngumthombo omkhulu wezixhobo, ugcina umthombo ovulekileyo weenkqubo zoyilo kunye neepateni ezifanelekileyo kubayili kunye namaqela.
Imilo yejiyometri yesazisi esitsha sabakhenkethi baseRussia ukukhuthaza ukutyelela ilizwe
I-Russia ivelise ilogo eya kuthi isetyenziselwe amaphulo entengiso ahlukeneyo ukutsala abakhenkethi abaninzi elizweni.
Uyizoba njani i-Pixel Art Style Spaceship kunye nePixel Art Studio
Sikufundisa indlela yokusebenzisa iPixel Art Studio ukwenza isiphekepheke onokuthi usisebenzisele loo mdlalo kwizixhobo eziphathwayo.
Ipeni entsha yedijithali ye-Bamboo Tip: Isisombululo sikaWacom se-Android kunye ne-iOS
Ukuba ufuna istylus esitsha, esikhutshwe namhlanje nguWacom kwaye sibiza i-Bamboo Tip, kunokuba ilungele ukusetyenziswa kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS.
Umdibaniso wemibala eli-16 kwimifanekiso emihle yaseLa La Land
Ukuba ujonge amacebo ombala ocacileyo ngokudibanisa okuphumeleleyo kwiwebhusayithi yakho, iLa La Land ngumthombo wokhuthazo kuyo.
Iipotifoliyo zoyilo ezingama-21 zokufumana inkuthazo yeyakho
Ukuba ujonge ukukhuthazwa kwiphothifoliyo yakho yobungcali, olu ngcelele lweephothifoliyo zilungile ukufumana ezo nkcukacha zikwenza wahluke kwabanye.
Uyilo oluzinzileyo lokupakisha, ukubaluleka kwalo kunye neeprojekthi ezikhuthazayo
Kuba kubalulekile ukwamkela uyilo oluzinzileyo lweepakethe kunye neeprojekthi ezibonisa indlela abayili ababalaseleyo abenza ngayo
Sebenza ngokucocekileyo kunye ne-Photoshop ngokudala amaqela angamaqhekeza
Sebenza ngendlela elungeleleneyo neFotohop ngokwenza amaqela eendlela ezikuvumela ukuba udibanise kunye noku-odola zonke iileya zakho kwiFotohop.
Obu bubungakanani bephepha A, B, C kunye nokunye okungqinelana nemigangatho eyahlukeneyo, nangona kukho ubukhulu obahlukeneyo baseMelika.
I-Adobe iyaqhubeka nokuhlaziya i-XD ukubonelela ngezixhobo zabaqulunqi be-UI / UX ukuphucula umsebenzi wabo ngale nkqubo.
Ifomula ephuhliswe ngababhali bamaxesha aphakathi kunye nabaqulunqi banamhlanje ukuba bafike kuyilo olugqibeleleyo lobeko lwephepha
Yazi ukuba zeziphi ezona zinto zibalulekileyo ezibonakalayo kwicandelo loyilo lwegraphic esiza kulibona kunyaka olandelayo.
Uluhlu lwemibala: ukusetyenziswa kunye nokudityaniswa
Fumana uluhlu lwemibala ngemizekelo yokusetyenziswa kunye nokudityaniswa. Ukuziqhelanisa kwenza ukugqibelela kwaye ngokukhawuleza kuchonge isikimu sombala ekujolise kuko kuthatha ukuziqhelanisa, ixesha kunye nolwazi.
Ibhodi yamabali, usetyenziso olutsha lweGoogle AI yokuguqula iividiyo zibe ziimpawu ezihlekisayo
Ubukrelekrele bokwenzela bukho kakhulu kwiGoogle app entsha yokwenza iziqhulo ezihlekisayo ezivela kwiividiyo esinazo kwiselfowuni.
Uyiguqula njani ifoto ibe ngumzobo nge-Photoshop
Sifundisa kwividiyo kwaye inyathelo ngenyathelo ukuguqula umfanekiso ube ngumzobo ngeFotohop. . Ngaba uyazi ukuba ungayenza njani? Fumanisa ngesifundo sethu.
Fumanisa ukuba ingaba indawo efanelekileyo yokusebenzela yomyili kufuneka ijongeke njani, yintoni ongayi kuyiphosa kwidesika yakho kunye nezixhobo ezifanelekileyo
Zithini iifonti ezintsha ekufuneka unazo kubayili? Apho unokuzikhuphela simahla iifonti ebalulekileyo yoyilo?
Ubukrelekrele bokwenziwa buze kwi-Adobe Lightroom suite yeenkqubo zokunceda kwiinkqubo ezithile ezinje ngokulungelelanisa ukuphucula iifoto.
Iijenreyitha ezintsha zelogo: izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Zithini izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zejenreyitha yelogo? Ukusebenza kwabavelisi be logo. Uyilo lwewotshi ekhawulezayo
Ungasele ujonge kuhlaziyo olutsha lwe-Photoshop CC oluya kuza nesixhobo esitsha: Khetha Isihloko.
Ukuba ungumdwebi wekhathuni, umfundi okanye i-animator, i-Storyboarder sisixhobo esimahla sokwenza amabali kwiWindows, Mac nakwiLinux.
Iqhosha lesithathu kwi-Wacom Pro Pen 3D liya kusetyenziselwa ukuyinika umsebenzi owongezelelweyo ogcina ixesha ngokungasebenzi kwikhibhodi.
Uyenza njani into engacacanga kwividiyo eneAdobe Premiere ufezekisa ukungaboni ngamehlo kumacandelo ethu omculo.
Guqula isicatshulwa sibe ziigophe ukuthintela iimpazamo zokuprinta kwaye uqinisekise ukuba iprojekthi yethu yemizobo ayinalo naluphi na uhlobo lwempazamo yokuchwetheza.
I-Adobe Cloak, okanye indlela yokususa izinto ezingafunekiyo kuyo nayiphi na ividiyo
I-Adobe iya kubandakanya itekhnoloji ye-Cloak kwiinkqubo ezahlukeneyo apho ungasusa khona izinto kwividiyo erekhodiweyo. Inqaku elimangalisayo.
IGraffica iphephancwadi ekufuneka umyili ngamnye abe nalo ekhaya ukuba ufuna ukwazi ngezinto ezenzekayo kwihlabathi loyilo.
Ukupakishwa koyilo ukuphucula ukuthengiswa kwemveliso kunye nokuma kwimarike ngendlela yoqobo kunye noyilo.
Lusuku lokwenza utshintsho lolusu. Zombini ebusweni bethu, izandla okanye iinyawo, nantoni na oyithandayo. Okwethu, komhlobo okanye ilungu losapho.
Intengiso yoyilo lwasentlalweni ukusindisa iplanethi ifuna ukwenza uhlobo lwentengiso egxile ekwaziseni nasekuthengiseni iimveliso.
Phuhlisa ukujonga okuhle kuyilo
Ukuze ube ngumyili wegraphic olungileyo kufuneka uyazi ukuba ungayibona njani kwaye uyiqwalasele imeko-bume yakho, ke fumana ingcebiso esikunika yona kweli nqaku.
Izinto eziyilwe ngumzobi kufuneka zikholeji
Ingavakala ngathi iyothusa, nangona kunjalo, kwaye kuya kuba kuhle ukuba abayili banokufunda ukufunda kwikholeji, ke qaphela.
Iingcebiso ezizodwa zokuqala inqanaba loyilo
Ukuba uyinxalenye yelo qela labantu abafuna ukuqala inqanaba loyilo, eli nqaku liza kuba lilungele ngokwenene, ke qaphela.
Sebenza simahla? Izizathu zokuba ewe ukwenze
Sifuna ukukubonisa izimvo ezininzi ezinokuba luncedo kakhulu, apho siza kuhlalutya kakuhle imeko nganye yasimahla ukuze uqeshwe amaxesha amaninzi.
Siza kukunika iingcebiso ezingazukukunceda ekuphuculeni ukusebenza kwakho xa usenza umsebenzi wakho njengomyili, kodwa kwanosuku lwakho.
Yintoni onokuyisebenzisa njengesalathiso ngalo mzuzu wokuphefumlelwa? Ngenxa yalo mbuzo, kule posi siza kuthetha ngee studio ezintlanu zoopopayi.
Umsebenzi wakho unexabiso kwaye ukuba ufuna ngenene ukuba uhlonitshwe ngomgangatho wawo, kuya kufuneka ubize into ocinga ukuba ufanelekile ngayo umsebenzi wakho, yile nto imalunga nayo.
Iindlela ze-analog okanye iindlela zedijithali, lo ngomnye wemibuzo ehlala isiza ezingqondweni zabaqulunqi begraphic.
Ukuprintwa kwe-3D yintsimi entsha apho iiprojekthi zoyilo-ntathu ziguqulelwa kwilizwe lokwenyani.
Izinto zokuphepha kuyilo xa usebenza ngesicatshulwa
Izinto zokuthintela kuyilo xa sibeka isicatshulwa ukwenza uyilo lwethu lusebenze ngakumbi kwaye lufikelele kubaphulaphuli abaninzi.
Guqula umbala womlomo ngeFotohop ngendlela yobungcali, ufezekise iziphumo ezizizo kwiiseshoni zethu zokufota kunye nokuchukumisa.
Umfundi ofunda uyilo lwegraphic kufuneka enze oko akufundileyo emsebenzini wakhe kwaye la ngamanyathelo okwazi ukuba ufundile ngokwenene.
Jonga umkhwa omtsha wefonti kwikamva
Eli lixesha elifanelekileyo lokuba uphonononge ukuba yeyiphi indlela eya kuthi ibonakalise ikamva lobuchwephesha kuyilo, ke ungaphoswa leli nqaku.
Iiprojekthi ezinomdla ezifumaneka kuMthombo oVulekileyo kaGoogle
Inkampani yaseCalifornia uGoogle isungule iwebhusayithi entsha eyaziwa njengeGoogle Open Source.
Akukho meko imbi ngakumbi kunamaxesha obunzima, ke ukusika iindleko kunye nezixhobo kunokuba yimfuneko.
Iitshathi yenye yezona ndlela zisebenzayo nezisebenzayo xa kuziwa ekuvezeni indlela yokuziphatha kwamanani.
Ungayithumela njani ilogo kumthengi ngendlela eyiyo
Uyithumela njani ilogo kumthengi ngendlela eyiyo yokufezekisa iziphumo ezibonisa ubuchule bethu njengabaqulunqi begraphic.
Le projekthi iNimbus, umhleli womfanekiso wexesha elizayo ovela kwiAdobe
Emva kwenkomfa yonyaka ebizwa ngokuba yi-MAX eSan Diego kwaye ibanjwe yiAdobe, le nkampani ithathe isigqibo sokuthatha ithuba loku…
Le nto ibizwa ngokuba yiProjekthi yeNeon imele enye yeekhonsepthi zoyilo kunye nolindelo oluphezulu oluvela kubasebenzisi beli qonga.
Izimemo zomtshato zasimahla
Ngaba ujonge izimemo zomtshato SIMAHLA? Ungaphoswa yile ingqokelela yomtshato kunye nemibhiyozo yesimemo sevektha kunye neetemplate.
Kwanele ngohlobo lweklasikhi egrey, isikwere kunye neenkonkxa ezilula. Ngoku siya kweyona mihla kwaye sixoxe ngendlela entsha yokwazisa ngemveliso.
Namhlanje siqulunqe izimvo ezili-12, amabinzana akhatshwa yimizekeliso ethetha ngamanqaku aphambili kuyilo lwegraphic njengobuchwephesha.
Amakhadi oshishino angaze aphume ngohlobo
Andiboni ndlela ilungileyo yokushiya idatha yenkampani yakho, iinkonzo, umsebenzi, njl., Ezandleni zomntu wesithathu kwaye kwangoko.
Usebenza njani nomyili kwiprojekthi yegraphic
Usebenza njani nomyili kwiprojekthi yegraphic yinto ekufanele ukuba siyazi njengabaxumi. Funda ukufundisa abathengi njengomyili oyile.
Izitudiyo ezaziwayo zoyilo
Namhlanje sizakuthatha uhambo lokuhambahamba ngokusebenzisa iigrafiki zoyilo olubalaselisa ubuchule babo, ukugqwesa, ukwenza izinto ezahlukeneyo kunye nezinye izinto.
Izihloko ezili-10 zeTV ezenziwe ngeMotion Graphics
Inkqubo ye-Motion Graphics ibhekisa kuhlobo lokurekhoda apho ukusetyenziswa kwazo zonke izixhobo ezazisetyenziswa ngaphambili akufuneki.
Unxibelelwano nomthengi kuyilo lwegraphic
Ukunxibelelana nomthengi kuyilo lwegraphic yinto ebalulekileyo ukuba sifuna ukubanakho ukusebenza ngokukhululekileyo nabathengi bethu.
USaul Bass utata weekhredithi zefilimu
USaul Bass utata weekhredithi zale mihla zefilimu ababonakala ngendlela yakhe yemizobo ekhethekileyo kumzi mveliso wefilimu.
Umzekeliso weNkampani: Funda ukwenza iSikhokelo seNdlela ngeNyathelo ngeNdlela yeVector
Umzekeliso wequmrhu ngulowo usetyenziselwa ukudala iilogo, iimveliso kunye nayo yonke into enxulumene nokuchongwa kwenkampani.
Indlela yokuhambisa ubugcisa bokugqibela kumthengi ngokuchanekileyo
Ungabuzisa njani ubugcisa bokugqibela kumthengi ngendlela echanekileyo neyobungcali, ukunqanda iimpazamo eziqhelekileyo kuyilo ngalunye loyilo olusezantsi.
Ezinye iingcebiso zokufumana kwakhona inkuthazo kuyilo lwegraphic
Isitshixo sempumelelo kukuhlala uphefumlelwe, nokuba uthini na umsebenzi wakho, eyona nto ibalulekileyo kukuba uhlala ugcina ingqondo yakho isebenza.
Uyilo kunye notshintsho lwetekhnoloji
Amagama amabini ngokungathandabuzekiyo ahambelana ngokusondeleyo kukuba ukwenza izinto ezahlukeneyo kukhokelela kwiziphumo ezahlukeneyo.
Iindlela zokufaka umbala kumfanekiso kwiFotohop
Iindlela zokufaka umbala kumzekeliso kwiFotohop kwaye uzise imifanekiso yakho ebomini ngendlela efanelekileyo kunye nentofontofo.
Yenza iibrashi zakho ze-Photoshop
Yenza eyakho i-Photoshop brushes ngokukhawuleza kwaye wongeze ukubamba kwakho kwiiprojekthi zakho zemizobo. Yenza ikhathalogu yakho yebrashi.
Iingcebiso zokuzoba umzimba womntu
Enye yezona zinto zinzima kwimbono yam kukuzoba umzimba womntu, okokuqala ukuze ubenakho ukufaka zonke iinkcukacha zawo emva koko ukubeke ephepheni.
Amanyathelo okwenza ilogo elungileyo yohlobo okanye imveliso
Amanyathelo okwenza ilogo elungileyo yohlobo okanye imveliso esebenza ngokufanelekileyo kwaye ifikelela kwinani elikhulu labasebenzisi. Yenza ilogo elungileyo.
Uyikhusela njani ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwi-intanethi
Ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ayikho ngaphezulu kwayo yonke into eye yavela kubukrelekrele, ukusuka kwingqondo yomntu, ke ngoko bhalisa umsebenzi wakho.
Amagama ayiliweyo Wonke uMyili wemizobo kufuneka awazi
Njengokuba kuqhele ukwenzeka, isigama esisetyenziswa kwicandelo asiqhelekanga kubantu abengeyonxalenye yaso, ke naka ingqalelo!
Yenza itshathi esebenzayo ngemigaqo esisiseko emi-4
Kweli nqaku siza kukuxelela ezinye zezinto eziya kuthi zibonise impumelelo enokuthi ifunyanwe nangubani na ofuna ukuba ngumvelisi wemizobo.
Ukubaluleka kolawulo oluphezulu olubonakalayo kuyilo
Ulawulo olubonakalayo lelinye lamaqhosha okuyila xa kusenziwa imifanekiso yokuprinta okanye yokusetyenziswa kwedijithali.
Yenza ibhukumaka nge-InDesign
Ukudala ibhukumaka nge-InDesign ngokukhawuleza kwaye ngokulula kunokwenzeka ngokubonga ngokukhululeka okukhulu apho i-InDesign ivumela ukuba sisebenze.
Imodeli yezithunzi kunye nezibane kunye neFotohop ngendlela eyiyo kunye nokufezekisa iziphumo ezingcono kuzo zonke iifoto zakho zokufota kwakhona ngendlela eyiyo
Ukuyila ipowusta ngokuchanekileyo ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi ngaphandle kwamathandabuzo yeyona njongo iphambili yoyilo ngalunye. Funda ngendlela yokwenza ipowusta esebenza ngokwenene.
Itemplate yoyilo loyilo loMzobo
Okulandelayo siza kuthetha ngamanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza itemplate ye-Excel yohlahlo-lwabiwo mali, enokuhlelwa ngokupheleleyo.
Iimpazamo ekufuneka ziyilelwe ngumyili ngamnye wegraphic
Kwinqaku lanamhlanje siza kuthetha nawe ngeyona mpazamo ixhaphakileyo ekufuneka bayile ukuyila abayili bayo.
Guqula umbala wamehlo nge-Photoshop ngokukhawuleza kwaye ngokulula ufumane isiphumo sobuchwephesha kunye nesinyani kwiifoto zethu.
Ukuba nesichazi magama esifanelekileyo semigaqo yoyilo lwegraphic kunye neentsingiselo kunokunceda ukwenza izinto kunye nomsebenzi wethu ube lula.
Bhalisela iikhosi ezingama-50% kwiTrazos_ kubayili
Bhalisela iikhosi ezingama-50% eTrasos_yabaqulunqi begraphic, i-3D, intshukumo okanye ezinye izinto ezinje ngemveliso ye-audiovisual.
Ukuphucula umgangatho wefoto kwi-Photoshop ngokulula nangokukhawuleza
Ukuphucula umgangatho wefoto kwi-Photoshop ngokulula nangokukhawuleza kunokwenzeka ngenxa yamaziko esivumela le nkqubo yeAdobe.
Ngale posi sifuna ukukubonisa amanyathelo athile ayimfuneko ukuze ube ngumyili wewebhu oyingcali.
Ukubaluleka kokwenza igama elifanelekileyo lophawu okanye imveliso kunokwenza umahluko phakathi kwempumelelo okanye ukusilela kweprojekthi yethu.
Iimpazamo ezintlanu zokuphepha kunye nabaxhasi beWebhu
Njengoyilo lwewebhu kuya kufuneka uyazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka ethathiwe xa usebenza nabathengi kunye nokuba ubize ntoni.
Ithetha ntoni uyilo lokuhlela?
Uyilo lomhleli lelo sebe loyilo lwegraphic elineyona njongo iphambili kukubekwa nokwenziwa kwalo naluphi na uhlobo lokupapashwa.